कोरोना संक्रमणका कारण धनुषामा ६० वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मंगलवार बिहान ३ बजे मृत्यु भएको छ ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको कोभिड अस्पतालको आईसीयू कक्षमा उपचार गराइरहेका धनुषाको बिदेह नगरपालिकाका पुरुषको मृत्यु भएको आइसोलेसन संयोजक डा. जामुनप्रसाद सिंहले बताए ।
करीब २० दिनअघि उनी प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयू कक्षमा भर्ना भएका थिए । ‘खकार परीक्षण गर्दा शुरूमा उनलाई क्षयरोगको किटाणु देखा परे पनि उनलाई प्रादेशिक अस्पतालको आईसीयू कक्षमा राखेर उपचार गरेका थियौं,’ डा. सिंहले भने, ‘त्यसपछि कोरोनाको समेत परीक्षण गर्दा ८ दिनअघि कोरोना पोजेटिभ देखा परेको थियो ।’
कोरोना पोजेटिभ आएपछि बिरामीलाई कोभिड अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको उनले बताए । ‘निमोनिया समेत बढ्दै गएको थियो र मिर्गाैलामा समेत खराबी देखा पर्न थालेको थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो २ दिनदेखि अवस्था अत्यन्त गम्भीर हुन थालेपछि परिवारजनलाई समेत जानकारी गराएका थियौं ।’
शवलाई प्रादेशिक अस्पतालमा नै राखिएको छ । शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
प्रादेशिक कोभिड अस्पतालमा ८ शय्याको आईसीयू रहेको तथा १ थान भेन्टिलेटर रहेको भए पनि भेन्टिलेटर र आईसीयू भरिएका कारण थप सिकिस्त बिरामीलाई भर्ना गर्न समस्या भएको उनले बताए । हाल कोभिड अस्पतालमा ४२ वटा शय्या रहे पनि ५३ जना बिरामी भर्ना भएका छन् । ३६ जना कोरोना संक्रमित बिरामीमा लक्षण समेत देखा परेको उनले बताए ।
जनकपुरस्थित कोभिड आइसोलेसनमा मिर्गाैलाका बिरामीको डाइलायसिस गर्ने मशिन जडान गर्न काठमाडौंबाट प्राविधिक टोली पुगेको छ । मंगलवार मशिन जडान भएपछि कोरोना संक्रमित मिर्गाैलाका बिरामीको डाइलायसिस समेत गर्न सकिने सिंहले बताए ।